ယဉ်ကျေးမှုရှုခင်း – Page2– ရှုခင်းသစ် NEW SIGHTS
ကမ္ဘာ့အမေများနေ့အထိမ်းအမှတ် “အမေ” (ဗဂျီအောင်စိုး -၁၉၂၄- ၁၉၉၀)
Posted on May 11, 2014 May 11, 2014 Khin LunnPosted in ပန်းချီ
ခင်ဝမ်း ရဲ့ The teeth နဲ့ အိပ်မက်ကြော်ငြာတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကိုတိုင် ရန်ကုန်ရောက်နေခိုက် အံကိုက် ဖြစ်ပြီး အိမ်က ပိုက်ဆံအတင်းတောင်း မုန့်မစား ဆေးလိပ်ခိုးမသောက် ရုပ်ရှင်မကြည့်ဘဲ ပထမဆုံး အကြိမ် ကိုယ်ပိုင် ခင်ဝမ်းရဲ့သီချင်းခွေကို ဝယ်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါတောင် တွေ့တဲ့သူတွေက အဓိကက မိန်းခလေးတွေပေါ့၊ ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ အဆိုတော် တခါမှမတွေ့ဖူးဘူးတဲ့ …. ခင်ဝမ်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်း ၂၆၀၉၂၀၁၁ သူ့အကြောင်း ဘာရေးရမလဲ၊ သူနဲ့က လူချင်းသိတာ မဟုတ်၊ လေးငါးကြိမ် ဆုံခဲ့ဖူးတယ်၊ ပြည်မှာ သုံးလေးကြိမ်၊ ဒါပဲ၊ ဒါပေမယ့် သီချင်းတွေ စတင်နားထောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန် ၁၉၈၀ မတိုင်ခင် အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘဝ မင်းအောင်၊ လွှမ်းမိုးတို့ စ […]
Posted on April 12, 2014 April 12, 2014 Khin LunnPosted in မြန်မာ့ဓလေ့
Posted on April 6, 2014 April 6, 2014 EditorPosted in ဓာတ်ပုံ
မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေ အများစုက တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ကျောင်းနေရမယ့် အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ပညာရေးနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဓာတ်ပုံဆရာ မိုးကျော်က ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီ မြို့က မြင်ကွင်းကို လျှပ်တစ်ပြက် မှတ်တမ်းတင် ထားတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Most of the children and youths are still in struggling for living in Burma(Myanmar). Even though they are in their early age that should have proper education at this time. This photo […]
Posted on April 1, 2014 April 2, 2014 အိုးဝေမျိုး1 CommentPosted in အက်ဆေး, မြန်မာ့ဓလေ့
Posted on March 24, 2014 March 25, 2014 Editor1 CommentPosted in သဘင်
မမြရင်ရဲ့ လွမ်းပိုဖွယ်ရာ မမြရင်ရဲ့ဇာတိရွှေဖလားကန်ရွာကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ရောက်သွားတယ်။ ရွာကလေးက တကယ့်အညာကျေးလက်ရွာစစ်စစ်လေးပါ။ ဖုံထူထူလှည်းလမ်းကြောင်း၊ ရှားစောင်းပြာသာဒ်ပင်၊ ရွာလယ်ဇရပ်…၊ နွားအုပ်ဆိတ်အုပ်၊ ရေစည်လှည်း…၊ ထန်းရွက်မိုးတဲ… စတဲ့ အညာကျေးလက် ပုံရိပ်တွေနဲ့…. လေဘာတီမမြရင်အကြောင်း သတိတရရှိလို့ ဆက်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ လေဘာတီမမြရင် အနှစ် ၁၀၀ ပြည့် မန္တလေးအငြိမ့်အလွမ်းပြေ ဗွီစီဒီလေးရိုက်ဖြစ်ကြတော့ မမြရင်ရဲ့ဇာတိရွှေဖလားကန်ရွာကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ရောက်သွားတယ်။ ရွာကလေးက တကယ့်အညာကျေးလက်ရွာစစ်စစ်လေးပါ။ ဖုံထူထူလှည်းလမ်းကြောင်း၊ ရှားစောင်းပြာသာဒ်ပင်၊ ရွာလယ်ဇရပ်…၊ နွားအုပ်ဆိတ်အုပ်၊ ရေစည်လှည်း…၊ ထန်းရွက်မိုးတဲ… စတဲ့ အညာကျေးလက် ပုံရိပ်တွေနဲ့ ရွာလေးပါ။ ဒီလိုရွာလေးက နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ကြီးတစ်ဦး ပေါ်ထွက်ခဲ့
Watercolor 2014 (Artist Khin Maung Zaw)
Posted on March 19, 2014 March 19, 2014 EditorPosted in ပန်းချီ
မြန်မာပန်းချီကျော် ခင်မောင်ဇော်၏ ရေဆေးလက်ရာမွန်များ
Inlay (Artist Khin Maung Zaw)
Posted on March 16, 2014 March 16, 2014 EditorPosted in ပန်းချီ
Entrance (Artist Khin Maung Zaw)
Posted on March 9, 2014 March 9, 2014 EditorPosted in ပန်းချီ
အဟောင်း (ပန်းချီ ဝဏ္ဏဇော်)
Posted on March 8, 2014 March 9, 2014 အိုးဝေမျိုးPosted in ပန်းချီ